15 septambra: Masina Maria nijaly sy vonton’alahelo – Trinitera Malagasy
15 septambra: Masina Maria nijaly sy vonton’alahelo
Hebrio 5, 7-9
Md Joany 19, 25-27
Anio moa ny Fiangonana dia mankalaza an’i Masina Maria nijaly sy vonton’alahelo, saingy miara-paly kosa ao amin’ny hafenoan’ny hafalian’ny fitsanganan-ko velona. Ny Papa Pie X moa no namerina ity fety ity tao amin’ny Tetiandro litorjika ny taona 1914. Ny tsaroana manokana amin’izany dia ireo lazaina ho alahelo fiton’i Masina Maria tsaroana sy hita ao amin’ny Soratra Masina sy ambaran’ny Lovam-panahy nifandovana. Tsy filazana ny alahelo loatra anefa fa fanambarana indrindra indrindra ny asa mahery sy ny fitiavan’Andriamanitra manome antsika ny fahasoavana hahafahana miombom-piainana amin’ilay Zanany, ary voalohany amin’izany ilay Reny niteraka Azy araka ny nofo.
Raha ampahatsiahivina vetivety moa ireo alahelo ireo dia ireto:
Lioka 2, 34-35: Ny faminanian’i Simoeona.
Ary nitso-drano azy ireo Simeona, ka nilaza tamin’i Maria renin’ny Zaza hoe: Indro, ity Zaza ity no voatendry ho fandavoana sy ho fananganana ny maro amin’Israely ary ho famantarana hotoerina, ary ny fanahinao aza hotanterahin-tsabatra – mba hiseho ny hevitry ny fo maro.
Matio 2, 13-21: fandosirana tany Ejipta
Lioka 2, 41-51: Jesoa very hateloana ka hita tao an-Tempoly afaka hateloana
Lioka 23, 27-31: Ny Reniny mifanena amin’i Jesoa mitondra ny Hazofijaliana
Joany 19, 25-27: Ny Reniny mijoro eo am-pototry ny Hazofijalian’i Jesoa (Evanjely anio).
Masina Maria mandray ny fatin-dJanany eo am-pelatanany.
Masina Maria mandao ny fatin’i Jesoa ao am-pasana.
Hanampy antsika hiatrika izay mety ho fitsapana eo amin’ny fiainana anie ny fety anio, ka hahafahantsika mijoro ho tena mpianatr’i Kristy tokoa, matoky fa hain’Andriamanitra ny mitondra antsika amin’ny hafenoan’ny hasambarana iantsoany ny zanany rehetra.